သံသယများ နှင့် Mister University Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် ကျော်ဇောဟိန်း (ခေါ်) ကောင်းမြတ်ဟိန်း သေဆုံးခြင်း အမှု
Mister University Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် ကျော်ဇောဟိန်း သေဆုံးသွားခြင်းနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့များမှ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးတင် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
အဆိုပါ အမှုမှန် ဖြစ်စဉ် မှန်ကန်စွာပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းမှ လိုအပ်သော သက်သေထွက်ဆိုချက်များကို
၁. အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ညမှ စတင်ကာ အဆိုပါ ဟိုတယ်တွင် နာရီပေါင်း ၂၀ကျော် ထွက်ဆိုပေးခဲ့ခြင်း ၁ကြိမ်၊
၂. ထပ်မံ လိုအပ်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆင့်ခေါ်မှုအရ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၁၀ဦးကျော်အား ရန်ကင်းရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးခန်းတွင် ၁ကြိမ်၊
၃. ၃ရက် ၂လတွင် မှူခင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လွှဲပြောင်းကိုင်တွယ်ပြီးနောက် ထပ်မံခေါ်ယူ စစ်ဆေးသည့်အချိန်တွင် အင်းစိန် CID ၀င်းအတွင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများမှ ၂ရက်တိုင်တိုင် သက်သေထွက်ဆိုခြင်း ၁ကြိမ်၊
၄. မန္တလေးရှိ မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ နယ်ရှိပြိုင်ပွဲဝင်အချို့အား ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း ၁ကြိမ်
အစရှိသဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ထွက်ဆိုချက်များ ပေးအပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အမှုအား အင်းစိန်ရဲစခန်းမှ ( သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၅/၂၀၁၄ ) ဖြင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ၃ရက် ၂လ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ လွှဲပြောင်းလက်ခံ စစ်ဆေးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
အဆိုပါ အမှုအား ၁၈ရက် ၂လ ၂၀၁၄ခုနှစ် တွင် တရားရုံးသို့ တရားဝင် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ အင်းစိန် တရားရုံးတွင် (ပြစ်မှုထွေမှု အမှတ် ၄၁/၂၀၁၄) ဖြင့် လက်ခံပြီး တွဲဘက်မြို့နယ် တရားသူကြီး (၂)ဦးမှစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရ ပါသည်။
အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုများတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များအား မေးမြန်းသည့် အချက်များအရ ပြိုင်ပွဲဝင် ကျော်ဇောဟိန်း သေဆုံးသည့် အကြောင်းအရင်းအချို့အား သိရှိထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း တရားရုံး၏ တရားဝင် စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်များ မထွက်ပေါ်လာသေးသဖြင့်၊ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရန် အဖွဲ့အစည်းမှ မည်သည့် ထင်မြင်ချက်၊ ဖြေရှင်းချက်မျှကိုမှ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
သို့ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ တဖက်သက် စွပ်စွဲချက်များ၊ မီဒီယာအချို့၏ တိကျခိုင်မာမှု မရှိသည့် အကြောင်းအချက် ဖော်ပြနေမှုများကို ယခု ရက်ပိုင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ရှိလာရသဖြင့် ယခု အချက်အလက် အချို့အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ သက်ဆိုင်ရာ မိသားစု၏ ဆုံးရှူံးမှုနှင့် ခံစားချက်ကို များစွာ ငဲ့ကွက် စာနာ ထောက်ထားပြီး ပြိုင်ပွဲအားလည်း အကန့်အသတ်မရှိ ၂ကြိမ်တိုင်တိုင်
သို့ရာတွင် အဆိုပါ သက်ဆိုင်သူ အချို့မှ ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသားများအားယခုအချိန်ထိတိုင် စွပ်စွဲပြောဆို လျှက်ရှိပြီး၊ မီဒီယာများမှလည်း မည်သည့် အရင်းအမြစ်မှ ရရှိသည့် အချက်များကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြသည်မသိ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသားများအား တရားခံများအဖြစ် စွပ်စွဲရေးသား
လျက်ရှိသည်ကို များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖွယ် တွေ့မြင်နေရပါသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူ အချို့ ရိုက်ကူးထားသည့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများအရ သေဆုံးသူသည်
ရေကူးကန်တွင် ပါဝင် ကူးနေခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး သေဆုံးပြီး ၀တ်ဆင်ထားသည့်
ဘောင်းဘီနှင့် ရေကန်အတွင်းသို့ မဆင်းမီ ၀တ်ဆင်ထားသည့် ဘောင်းဘီမှာ တူညီနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ပြန်လည် ဆယ်ယူပြီးသည့် အချိန်
ရင်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ စစ်ဆေးခြင်း မဟုတ်ဘဲမှုခင်းဆရာဝန်ကြီးအပါအ၀င် ဆရာဝင်ကြီး (၄)ဦး ပါဝင်သည့် အထူးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီးမှသာ စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ဓါတုဗေဒ၀န်ရုံးသို့ ထပ်မံ ပေးပို့ စစ်ဆေးရာတွင် သေဆုံးသူ၏ သွေးအတွင်း အရက် ပမာဏအချို့ ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက် အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်များအား မေးမြန်းစုံးစမ်းခဲ့ခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသည်။
မှုခင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကောင်းမွန်စွာ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုအခါတွင် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ပြန်လည် ပေးပို့ကာ အမှုဖွင့် စစ်ဆေး နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအမှုသည် လက်ရှိတရားရုံးတွင် သေမှုသေခင်း အမှုအဖြစ်နှင့်သာအမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခု အချိန်အထိ သံသယရှိသည်ဟု မည်သည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးထားခဲ့ခြင်းလည်း မရှိပါ။ တရားရုံးတွင် ၄ရက်နေ့ ပထမအကြိမ် ချိန်းဆို စစ်ဆေးသည့် ပွဲသို့လည်း ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းရှိ မည်သူ့ကိုမှလည်း အကြောင်းကြား ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
ယခုဖြစ်စဉ်သည် သတင်းဂျာနယ် အချို့တွင် ရေးသားဖော်ပြနေသကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ သေမှုသေခင်း ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါက ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူ များအတွက် များစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေမည့် အပြင်၊ မှားယွင်းသော ထင်မြင်ယူဆချက် အလွဲများ ပြောဆိုချက်များကြောင့် အဆိုပါ မီဒီယာများ၏ အမည်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာအား ထိခိုက်လာမည်ကို တွေ့မြင်မိပါသည်။
ယခုကဲ့သုို့ တိကျခိုင်မာမှု မရှိသည့် အချက်များကို ကိုးကားပြီး၊ တစ်ဖက်သက် ထင်မြင်ချက်၊ စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းစေရန် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား လက်ရှိ ဖော်ပြလျက်ရှိသည့် ဂျာနယ် သတင်းမီဒီယာများမှ ဆက်လက်ရေးသားခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ တရားဝင် အဖြေထွက်ပေါ်လာသည့် အချိန်မှသာ အဖြစ်မှန်ကို ရေးသားဖော်ပြနိုင်ကြပါရန် အသိပေး ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
August Myanmar Media Group
သက်သေထွက်ဆိုချက်များသည် ခိုင်မာသော မှတ်တမ်းများ မပါဝင်ပါက အနည်ငယ် ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
အပြင်လူ သက်သေစကားများမဆိုနှင့် မိသားစုဝင် အချင်းချင်း ပြောဆိုသည်များပင် လွဲမှားနေသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
ယင်းပြိုင်ပွဲဝင်၏ မိဘနှစ်ပါးစလုံးမှ “သူသည် ရေကောင်းကောင်း မကူးတက်သေးပါ. စတင်သင်နေဆဲဖြစ်တယ်. သို့အတွက်ကြောင့် ရေကူးဝတ်စုံကိုပင် သိမ်းထားပြီး ရေမကူးစေရန် ထည့်ပင်မပေးထားပါ”ဟု (*ယခု ဘောင်းဘီသည် အခြားပြိုင်ပွဲဝင်ထံမှ ငှား၍ ဝတ်ပြီး ရေဆင်းကူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ * Beach Fashion Challenge နေ့၊ အဆိုပါ ရေကူးကန်တွင် ကျင်းပသည့် အမျိုးသား ရေကူးပြိုင်ပွဲတွင်လည်း သေဆုံးသူ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။) ပြောသည်ကို ပြိုင်ပွဲဝင်များ ကြားရပြီး၊ မောင်နှမများမှ သူသည် “ရေကူးအထူးကျွမ်းကျင်ပြီး ဆုများပင်ရဖူးသူ တစ်ယောက်” ဖြစ်သည်ဟု ပြောပြန်သည်ကိုလည်း ကြားသိရပြန် ပါသည်။
မိသားစုဝင်များ ပြောသည်ပင်ကွဲလွဲ နိုင်သည့်အတွက် တရားရုံးမှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်သည့်အချက်များ မဟုတ်ဘဲ ထင်မြင်ယူဆချက်များဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည် အခြားသူများအား နစ်နာမှုများ ရှိနိုင်သည့်အတွက် အထူးပင်ဂရုပြုပြောကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဓာတ်ပုံအချို့အား ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ဖုန်းများမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ စုစည်းပေးပို့ခဲ့ရသဖြင့် (မှားယွင်းစွာ ပြောကြားနေသည်များ ကြားသိနေသဖြင့်) ဖော်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရက်ပမာဏတွေ့သည့်အချက်သည် ပြိုင်ပွဲဝင်များအား CID မှ အထူးမေးမြန်းသည့် အချက်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုဖော်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါအချက်အား CID မှ မေးမြန်းထားသည့်အတွက် မိသားစုဝင်များမှလည်း သိရှိပြီးသား ဖြစ်ပါမည်။ တရားဝင်ဆေးစစ်ချက်အား တရားရုံးတွင် ဖော်ပြလာသည့်
အချိန်တွင်မှ ပိုမိုတိကျသည့် အချက်များကို ရရှိကာ၊ အမှန်တရားကို တွေမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းမတိုင်မီ ပြောဆိုနေမှုများသည် မှားယွင်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပြီး၊ အဆိုပါ စကားများကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ၂ဦး၂ဘက်လုံး ရှိနိုင်သည့်အတွက် သတိပြုနိုင်ပါရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။